Falanqeeye ka tirsan Shabakadda ESPN oo Griezmann u sheegay kooxda ugu fiican oo uu ku biiri karo – Gool FM
(Yurub) 16 Maajo 2019. Liverpool ayaa ah kooxda ugu fiican uu ku biiri karo weeraryahanka reer France iyo kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann, sida laga soo xigtay Craig Burley oo falanqeeye ka ah shabakada ESPN.
Antoine Griezmann oo haatan 28 jir ah ayaa shaaca ku dhawaaqay inuu ka tagayo Atletico Madrid xili ciyareedkan, halka kooxda reer Spain war saxaafadeed ay soo saartay ay ku xaqiijisay in xilli ciyaareedkan uu noqon doono kii ugu danbeeyay ee xiddiga reer France.
Antoine Griezmann oo dhawaan kasoo muuqday muuqaal fiidiyow ah ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyay sababaha uu kaga tagayo kooxda Atletico Madrid, wuxuuna doonayaa inuu tijaabiyo khibrad cusub oo meel kale ah, isagoo u mahadceliyay taageerayaasha, maamulka, ciyaartoyda iyo shaqaalaha farsamada.
Wargeyska “Daily Express” ee dalka England ayaa soo wariyay in Griezmann uu ugu dhowyahay kooxda Barcelona si la mid ah xili ciyaareedkii hore oo kale.
Laakiin Craig Burley ayaa sheegay in Liverpool ay tahay kooxda ugu fiican uu ku biiri karo Antoine Griezmann, islamarkaana uu bandhig fiican ka sameyn karo Reds.
“Waxaan qabaa in Liverpool ay tahay kooxda ugu fiican uu ku biiri karo Antoine Griezmann xagaagan”.
“Liverpool waa koox horumar weyn sameeneysa, joogitaanka Griezmann waxay gacan weyn ka geysan doontaa inay sii hormaraan, gaar ahaan wuxuu ka caawin doonaa Roberto Firmino dhanka weerarka”.
“Liverpool waxay u baahan tahay inay iska xoojiso dhanka weerarka, islamarkaana ay abuurto jawi tartan ee ah dhanka weerarka, hubaal heshiiska Griezmann ayaa suuragal ka dhigi kara in arintan ay dhacdo”.